China Aluminium SOLID PANEL fekitari uye bhizimisi | Alucosun
Alucosun SOLID ® ndeyeAluminium Solid pre-pendi pamapaneru eakakura aruminiyamu alloys ane akasiyana siyana ukobvu uye nishing sarudzo dzakakodzerwa dzakaringana dzepamberi, padenga, siringi kunyorera. Inoonekwa seimwe yeakasimba kwazvo, akachengeteka, ehupfumi uye ecofriendly kuputira aripo mazuva ano.
Alucosun SOLID ® inorondedzerwa seClass A1 Fire Resistant facade yakaedzwa ichipesana ne EN13501 uye kusimba kwayo kunonzi kune PVDF yekumira zvivakwa zvine huwandu hwakawanda hwemavara uye anopedzisa masutu kune akasiyana mafomu.
Alucosun SOLID®iyo Aluminium Solid pre-pendi pamapaneru eakakura aruminiyamu alloys ane akasiyana siyana ukobvu uye nishing sarudzo dzakakodzerwa dzakakodzera façade, denga, siringi kunyorera Inoonekwa seimwe yeakasimba kwazvo, akachengeteka, ehupfumi uye ecofriendly kuputira aripo mazuva ano.
Alucosun SOLID ® inorondedzerwa seClass A1 Fire Resistant façade yakaedzwa ichipesana ne EN13501 uye kusimba kwayo kunofungidzirwa kuti kune PVDF yekumhara zvivakwa zvine huwandu hwakawanda hwemavara uye inopedzisa masutu kune akasiyana mafomu.
Tsananguro Range Standard
Ukobvu hwepaneru 2-5mm 2mm, 3mm
Upamhi 1000-1500mm 1250mm, 1500mm
Kureba 1000-5800mm 2440mm, 3050mm, 3200mm
Chiwanikwa Type AA 1000, AA 3003, AA 5052 AA 1100, AA 3003
Kurema 8.2kg / m2 ye3mm
Upamhi (mm) 0 kusvika -0.4mm
Kureba (mm) ± 3mm
Ukobvu (mm) ± 0.2mm
Diagonal Line Musiyano (mm) Mm5mm
Edge Kururamisa (mm ≤1mm
Mechanical Uye Panyama Zvivakwa
Tensile Yekupedzisira 185 MPA
Tensile Zvibereko 165 MPa
Elongation @ Kuputsa 1-4%
Modulus yeElasticity 68.9 GPa
Sheari Modulus 25 GPa
Sheari Simba 110 MPa
Thermal Kuitisa 154 W / mk
Kunyorera Nzvimbo 643 - 654 C
Kuwedzera kwekushisa 413 C
Yakananga Giravhiti 2.73 G / C.
Solid Aluminium Pvdf Kuchengeta
S. Kwete Parameter Chikwata Muedzo Webvunzo Mhedzisiro
1 Bemhapemha Type - - PVDF yakavakirwa fluorocarbon kupfeka 15-20
2 Bemhapemha garandi - - 15-20 makore
3 Gloss @ 60 dhigirii % ASTM D 523 20-80
4 Kugadzikana (T-bend) T ASTM D1737-62 2T, hapana kutsemuka
5 Reverse kukanganisa- kuyambuka - NCCA II-5 Hapana chekusarudza
6 Kuoma-penzura min ASTM D3363 Min
7 Adhesion Yakaoma Mvura Inotonhora - ASTM D3359, nzira 8 37.8 ° C, 24 hrs. 100 ° C, 20 min. Kwete kutora Hapana kunhonga Hapana kutora
8 Hasha nemishonga marita / mil ASTM D968-93 (Kudonha jecha) 40
9 Chemical Nemishonga - ASTM D1308-87 ASTM D1308-87 ASTM D1308-87 AAMA2605 ASTM D2248-93 Hapana shanduko
10% HCL (15 Maminetsi Spot Bvunzo)
20% H2SO4 72 Maawa
20% NaOH 18 Maawa
Dhaka Pat bvunzo 24 Maawa
Detergent, 3% mhinduro, 38ºC, 72hrs
10 Mamiriro ekunze-o-mita bvunzo - Max. Zvikamu zvishanu mushure memakore gumi
Kuchengetedza kwemavara ASTM D2244-93 Min 50% mushure memakore gumi
Kuchengeta gloss ASTM D523-89 Max. 8 mayuniti emavara & 6 e
Chalk kuramba Yakachena mushure memakore gumi
11 Munyu pfapfaidzo kuramba Hrs ASTM B117-90 Blister-10, munyori-8, mushure me4000
hrs, 35 ° C munyu mhute
12 Humidity kuramba Hrs ASTM D2247-94 Hapana mablisters Mushure me4000 hrs, 100% RH, 38 ° C
Alucosun SOLID® inoedzwa zvinoenderana neEN13501 yakarongedzwa mukirasi A1 inova chaiyo isingatsve chigadzirwa. Mukuteedzana neNFPA kodhi yekuchengetedza hupenyu uye akasiyana masimba emitemo asina-anoputirwa machira anotenderwa mumhando dzese dzechivakwa pasina chinorambidzwa. Panyaya iyi, AlucosunSOLID ®nekirasi A1 inogona kuiswa muzvivakwa zvechero kureba uye mhando.
Kuedza Chinhu Mhedzisiro
EN13501-1 Kirasi A1
Aluminium inoonekwa seyakagadziriswa simbi yakawanda yesimbi; iri yemahara kubva Heavy simbi kukurwa kwevhu. Aluminium inogona kudzokororwa pasina mhando mutsauko. Yakagadziriswa aluminium haina kusiyaniswa nemhandara aluminium, maitiro haaburitse chero shanduko musimbi, saka aluminium inogona kudzokororwa zvachose. Kudzokorora aluminium kunoponesa 95% yemagetsi emagetsi ekugadzirisa nyowani aluminium.
Nguruve dzinoshandiswa mupendi system panguva yekugadzirwa kweAlucosun Solid ®haina ngozi. Ipo ichiputira iwo Solid mapaneru tekinoroji inoshandiswa kugadzirisa iyo inobvumidza iyo solvents yakaburitswa kubva pamapendi inopiswa uye inodyiswa kumashure kuita.
Makore uye ANOPEDZA
Alucosun SOLID®pamusoro yapera nePVDF uye Nano pendi system mune inoenderera coil yekumhanyisa maitiro ayo anovimbisa mhando uye kuenderana mukutevedzera AAMA 2605 kududzirwa. Solid Colors anowanzo ari majasi maviri (26 +/- 1 µm) nepo simbi iri matatu (3) majasi (32 +/- 1 µm).
Paint system ine inoumbwa neashoma 70% PVDF resin inozivikanwa nekukwirisa kurwisa UV mwaranzi uye nemhedzisiro mhedzisiro, saka Alucosun SOLID ® yakasimba uye inowirirana mashandiro mumamiriro ekunze akaipisisa.
Sisitimu inopa yekuwedzera yakajeka topcoat ine yakanyanya-yakasangana-yakabatana Nano zvidimbu pane PVDF kupera; iyo inovimbisa kumeso pamusoro. Smooth uye yakajeka pamusoro inoita kuti ivhu uye guruva zvinetseke kunamatira pane izvo zvinopa chivakwa kugara chakachena kutaridzika. Nano PVDF inozvichenesa pendi system.
Paint masisitimu akasimba kwazvo anovimbisa makore gumi nemashanu kusvika gumi nemashanu ekupedza garandi.
Mapaneru ane akasiyana sarudzo dzekupedzisa anowanikwa muAlucosun SOLID ® zvisinei inozviisa pasi peimwe nguva uye kukura kweganho. Zvinodzivirirwa neanodized dura SOLID mapaneru akasimba kwazvo kukwenya kusagadzikana kunopa garandi ingangoita makore makumi matatu.
Ese akajairwa uye echinyakare matekiniki ekumisikidza maFasidha anogona kutorwa kune kumisikidzwa kweSOLID mapaneru. Imwe sarudzo yekugadzirisa Chakavanzika inoita kuti ive yakasiyana nezvakaunganidzwa zvekufukidza zvigadzirwa. Chero maumbirwo concave, convex, kona, kufukidza mbiru, softs, canopy nezvimwe zvinogona kugadzirwa nyore nyore uye kuiswa. Kuti uwane yunifomu yekuwedzera kupisa zvinokurudzirwa kushandisa sub- chimiro chakagadzirwa neAluminium. Zvinokurudzirwa kushandisa mapaneru kubva pakushandiswa kamwe uye yunifomu yekumisikidza nongedzo yekupedzisa kupera.
Alucosun SOLID® inogadzirwa netaundi yakatetepa ye lacquer padivi rekumashure kuve nechokwadi chekubatana kwakasimba nema adhesives saka inogona kusungirirwa zvakananga kuchinzvimbo pasina chero chinoonekwa chekugadzirisa chinowanikwa.
Mapaneru e3 mm ukobvu uye pamusoro akachengeteka kune weld (ISO 14555: 2017) ine stud bolts kumashure kwepaneru yekuviga kugadzirisa. Chiwanikwa 3003 uye 5005 anoshandiswa ukomba zvakanaka kuti nomoto chinangwa. Welding padivi rerutivi rweMapaneru ne3 mm uye pamusoro haigone kukanganisa pamvura yapera.
Alucosun ® chirongwa cheWis om Metal Composites Ltd icho brin gs chinogadzira zvigadzirwa zvekupedzisira pamwe chete nenzvimbo yedu yekugadzira inogadzirwa iri kuJiangsu, ichisimudzira madhisiki maviri ezviitiko zvine hupfumi muAluminium Panel Indasitiri.
Alucosun ®chiratidzo chinopa zvese zvaunoda zvekugadzira mapaneru, angave ari Facade, Roof, Ceiling, Advertising, Corporate Chitupa. Yakashongedzerwa nezvose zviri-mumba zvivakwa kuti uve nechokwadi chehunhu chigadzirwa uye zvekuendesa zvisungo.
Isu tinopa zvakanakisa zvigadzirwa zvine yekupedzisira teperfection; inowanikwa neyakaenzana musanganiswa wevashandi veindasitiri, tekinoroji yazvino uye michina yemhando yepamusoro.
Yakagadzwa nzvimbo yekugadzira inodarika gumi Miriyoni M2 pagore, iine matatu (3) zvirimwa zveakasiyana Mapurani ekugadzira, Colour Coating pamwe neyakagadzirirwa In-imba Laborator.
Alucosun ®inoshanda muFar East, Middle East, Europe neAmerica. Mahofisi edu ematunhu, vatengesi, vamiririri nevashambadzi mudunhu rese vanotigonesa kuzadzisa zvido zvako zvezvivakwa zvekuvakisa nemasevhisi ekutsigira chero kwaunenge uchida.
Pashure: Alucosun PE